Home Wararka Gudaha Faysal Cali Waraabe: “4 sano & Badh oo uu joogo Muuse Biixi...
Faysal Cali Waraabe: “4 sano & Badh oo uu joogo Muuse Biixi waxa aan ka gudbi weynay Dood, Is necbeysi & muran uu u bixiyay ila-meereyso”.
Guddoomiyaha Xisbiyada Mucaaradka UCID ayaa sheegay in Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi uu Somaliland gaarsiiyay xaalad siyaasadeed oo qasan si uu ugu waqti dheereysto dib u dhigista Doorashada sida uu hadalka u dhigay.
Faysal Cali Waraabe ayaa Tilmaamay in xalka keliya ee lagu qanci karo uu yahay in Doorashadu dhacdo waqtigeeda oo ah 13ka November 2022 si loo ixtiraamo Dastuurka iyo qodobada kale ay heshiiska ku yihiin.
Madaxweyne Muuse Biixi ayuu ku dhaliilay in uu wax ka qaban waayay 4ta sano iyo barka uu xafiiska jooga wax ka qabashada sare u kaca Maciishadda, shaqo la’aanta jirta, tixgelinta dastuurka iyo waxyaabaha kale ee heshiiska lagu yahay.
“Dadkeennu waxa ay dugsanayeen Nabadda 30kii sano u dambeysay marka laga reebo 4taa sano iyo badhka ee uu Muuse Biixi joogo in aynu dood is necbeysi, kala qaybsi & muran uu u bixiyay ila-meereyso sameeyay” Faysal Cali Waraabe.
Xalka keliya ee u furan mucaaradka ayuu Faysal Cali Waraabe ku sheegay in uu yahay mudaharaad lagu muujinayo dareenka Shacabka si loo qabto Doorashada isla markaana madaxweynaha uu culeys u dareemo.
“Waxaa nala soo hadlay Dadka naca caawin jiray Doorashada ee ajnabiga ah, oo waxa ay naga codsadeen in aan mudaharaadka hakino si loo arko Dadka wax diidan, sidoo kale Sabtida waxaa billaabanaya Imtixaannada Dugsiga sare haddii aan ka qash-qashno soo inkaar naguma dhaceyso, waynu iska qabaneynaa haddii ay caqli yeelan waayaan, Shacabka waxa aan leenahay naga raalli ahaada innaga oo aan waxba idiin qaban oo waddo idiin dhisin muddo ku dhaw 5 sano oo aan biyo idin siin” ayuu yiri Faysal Cali Waraabe, Guddoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee UCID.
Xukuumadda Somaliland weli kama hadlin go’aanka Axsaabta Mucaaradka ee Waddani iyo UCID ay ku baajiyeen dibadbaxa ay diidaneed, waxaa lagu wadaa in Magaalada Hargeysa ay ka billawdaan wadahadal u dhaxeeya Ergada Dhexdhexaadinta wada iyo dhinacyada is haya.
Previous articleMaxay Cunnooyinka qaar ay u sababaan Gaastariga?
Next article40; kun oo Arday oo maanta u fadhiisatay Imtixaanka Shahaadiga ee Somaliland
Gobolka Banadir oo afka furtay qeyla dhaanne ka keenay hanti Dad-weyne...
Munaasabad lagu maamuusayay Aas-aaska ciidamada xoogga dalka Jabuuti ayaa maanta...
Uganda oo dayaxgacmeed( satelite) hawada sare udiri rabta.